Lahatsary: ​​Tolom-piavotan'ny haino aman-jery sosialy 3 | Martech Zone
Horonantsary: ​​Revolution Revolution 3
Alarobia, Jolay 13, 2011 Alakamisy Oktobra Oktobra 27, 2011 Douglas Karr
Noho ny antony sasany dia tsy reraka aho nijery an'ireto horonantsary mahatalanjona ireto avy Socialnomics. Ity kinova farany amin'ny horonan-tsary Socialnomics ity dia navoaka tamin'ny volana Jona, 2011. Ny Socialnomics dia natsangan'i Erik Qualman ho fikasana hanome ny statistika, ny fandalinana ary ny fahagagana. Aza hadino ny mijery ny bilaogin'i Erik. Manantena aho fa hampiakatra azy amin'ny Fampisehoana Teknolojia Marketing andro vitsivitsy!
Nahafinaritra ahy izany… na dia, araka ny fanamarihana iray aza, dia notsipahin'izy ireo tamin'ny fomba diso ny tarika Star Wars tamin'ny fanoratany an'i Darth Vader tsy marina.
Fanavaozana ny Gmail… Aleo tara noho ny tsy misy
Fanatsarana ny motera fikarohana ao amin'ny bilaogy